आजदेखि ११ दिनसम्म भेरोसेल खोप लगाइदै, कुन जिल्लाका क-कसले पाउँछन्? — Imandarmedia.com
आजदेखि ११ दिनसम्म भेरोसेल खोप लगाइदै, कुन जिल्लाका क-कसले पाउँछन्?
काठमाडाैं । सरकारले आजदेखि कोरोनाविरूद्ध भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाउने निर्णय गरेको छ। हालै चीनबाट खरिद गरेर ल्याइएको ४४ लाख डोज भेरोसेल खोप विभिन्न जिल्लाका विभिन्न उमेर समूहका मानिसलाई लगाउने निर्णय गरेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आजदेखि ११ दिनसम्म कोरोना विरूद्ध भेरोसेल खोप लगाइनेछ। आजदेखि असोज १४ गतेसम्म पहिलो मात्रामा खोप लगाउन लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। पहिलो मात्रामा भेरोसेल खोप लगाउनेलाई कात्तिक ४ गतेदेखि १४ गतेभित्र दोस्रो मात्रामा भेरोसेल खोप नै लगाउन पाइन्छ।
कुन जिल्लामा कुन उमेर समूहकालाई खोप ?
मन्त्रालयका अनुसार सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, दार्चुला, बाजुरा र रसुवामा १८ वर्षमाथि उमेर समूहकाले भेरोसेल खोप लगाउन पाउनेछन्।
यसअगाडि कोरोनाविरूद्ध खोप लगाउन छुटेका मानिसले यसपालि खोप लगाउन सक्ने पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले बागमती प्रदेशका चितवन र काभ्रेमा ३५ वर्ष उमेरमाथिकालाई पनि खोप लगाउने भएको छ। साथै १८ वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई पनि खोप दिइनेछ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीनवटै जिल्ला, रामेछाप, मकवानपुर, सर्लाही र अछामका ४० वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई पनि कोरोनाविरूद्ध खोप दिने सरकारको तयारी छ।
विभिन्न ५८ जिल्लामा ४५ वर्ष उमेर समूहमाथिका मानिसले खोप लगाउन पाउनेछन्। विद्यार्थीहरूलाई पनि खोप लगाउन सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। मनाङ, मुस्ताङलगायत जिल्लामा भने सरकारले कोरोनाविरूद्ध खोप लगाइसकेको छ।
पहिलो मात्रामा भेरोसेल खोप लगाइसकेका काठमाडौंका मानिसलाई आजदेखि तीन दिनसम्म दोस्रो मात्रामा खोप लगाइनेछ। पहिलो मात्रामा करिब दुई लाख ४० हजारले भेसोसेल खोप लगाए पनि दोस्रो मात्राको खोप लगाउन पाएका थिएनन्।
उता विद्यालयहरूमा भौतिक उपस्थितिमा तत्कालै अध्यापन सुरु गर्ने या नगर्ने विषयमा बहस चलिरहँदा सरकारले १२ देखि १८ वर्षको उमेर समूहका बालबालिकालाई लक्षित गरिएका खोप चाँडोमा आगामी पुस मसान्तभित्र आइपुग्नसक्ने बताएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह प्रवक्ताले उक्त उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप दिन कार्य योजना बनाइएको र त्यसअनुसार खोप खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बीबीसीलाई बताए। हालसम्म नेपालले १८ वर्ष भन्दा बढीको उमेर समूहलाई मात्रै कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
असोज १ गतेसम्म झन्डै ६१ लाख नेपालीले पहिलो मात्रा र ५५ लाख भन्दा बढीले दुवै मात्रा खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ४० लाख मोडेर्ना र थप फाइजरका खोपहरू केही महिनाभित्रै नेपालमा भित्रने बताइरहेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डाक्टर समीरकुमार अधिकारी भन्छन्, “पुस मसान्तसम्म त्यस्ता खोपहरू आइपुग्ने भन्ने हो तर अहिले हामीले १८ वर्ष भन्दा बढी उमेर समूहका व्यक्तिलाई नै सकेसम्म चाँडो र धेरै भन्दा धेरै खोप उपलब्ध गराउने हिसाबले केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो कार्य योजनामा १८ र १२ वर्षबीचको उमेर समूह पनि छ।”
उनले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत मोडेर्ना र फाइजरका खोप खरिद् सम्बन्धी सम्झौता गरिएको भन्दै सुरुमा मोडेर्नाको खोप आइपुग्ने जानकारी दिए। उनी थप्छन्, “यी खोपहरू बालबालिकालाई मात्रै नभई १८ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका छुटेका जनसङ्ख्यालाई पनि दिने गरी हामी व्यवस्था मिलाउँछौँ।”
मोडेर्ना खोपको खरिदका लागि नेपाललाई ७ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ भन्दा बढी आर्थिक सहयता उपलब्ध गराएको विश्व ब्याङ्कले गएको अगस्टमा मोडेर्ना खोप सन् २०२२ को मार्च यसै वर्षको फागुन वा चैतमा आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको बताएको थियो। उक्त खोप १२ देखि १७ वर्षको उमेर समूहका लागि पनि प्रभावकारी र सुरक्षित रहेको बताइन्छ।
खोप अभियानको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विवेककुमार लालले फाइजर बायोएनजेकको खोप १२ देखि १७ वर्षको उमेर समूहलाई लगाउने विषयमा सकारात्मक ढङ्गले छलफल अघि बढेको बताए।
पूर्व तयारी सुरु
उनका अनुसार उक्त समूहलाई खोप अभियानमा पूर्ण रूपमा समेट्नका लागि पूर्व तयारीका कामहरू सुरु भइसकेको बताइएको छ। डाक्टर लाल भन्छन्, “हाम्रो अहिलेसम्मको छलफलमा उक्त खोप आउने मिति नै त तय भइसकेको छैन। तर सन् २०२१ को अन्तिम चौमासिक र सन् २०२२ को पहिलो चौमासिक गरेर दुई चरणमा खोप उपलब्ध हुने भनिएकाले त्यही अनुसार पूर्व तयारीको काम भइरहेको छ।”
हालसम्म नेपालले कोरोनाभाइरस विरुद्धको अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेकाद्वारा विकास गरिएको खोप, अमेरिकी जोनसन एन्ड जोनसनको खोप र चिनियाँ भेरोसेल खोप प्रयोगमा ल्याएको छ। अधिकारीहरूले १८ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका वयस्कहरूलाई दिन मिल्ने गरी १ लाख ६ हजार फाइजरको खोप कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत भित्रने लागेको जनाइएको छ।
बालबालिकालाई दिने भनिएका फाइजर र मोडेर्ना खोपहरूको भण्डारणका लागि ‘अल्ट्रा माइनस’ अर्थात् अति चिसो तापक्रमका फ्रिजरहरू चाहिने भएकाले तीनको खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका थिए। सरकारले असोज मसान्तसम्म कुल दुई करोड पाँच लाख खोप नेपाललाई प्राप्त हुने र त्यसबाट नेपालको जनसङ्ख्याको एकतिहाइलाई खोप दिइसक्ने बताएको थियो।
मोडेर्ना र फाइजरसहित कुल पाँच करोड २२ लाख मात्रा खोप आगामी माघ महिनासम्म नेपाल ल्याइसकिने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा केही महिना अघि जानकारी दिएका थिए।
विश्वका धेरै देशले आफ्ना नागरिकलाई खोप दिइरहेको छ । सामान्यतया कोभिड खोप लिएपछि मानिसहरुमा टाउको दुख्नु, ज्वरो आउनु, एक–दुई दिन सुई लगाएको ठाउँ पाखुरामा दुख्नु आदि असरहरु देखिनु सामान्य हो । तर, खोपकै कारण महिलाको महिनावारी चक्रमा परिरहेको छ भन्ने विषयले महिला तथा किशोरीमा चिन्ता र चासो बढेको छ ।
ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस एचपीभी भ्याक्सिन र फ्लुले महिनावारी चक्रमा प्रभाव पार्ने तथ्य फेला परेका त छन् । तर, तिनले दीर्घकालीन रुपमा असर गर्दैनन् । साथै यी खोपले प्रजनन् क्षमतामा पनि असर नपार्ने बताइएको छ । हालसम्म खोप तथा महिनावारी चक्रमा असर पार्ने भनेर कुनै यकिन सम्बन्ध देखिएको छैन । जनस्वास्थ्य विज्ञहरु खोप एकदम सुरक्षित तथा महामारीलाई अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन् । खोप र महिनावारीको असरबारे वैज्ञानिक अध्ययनहरु अहिलेसम्म प्रकाशित भइसकेका छैनन् ।
इम्पेरियल कलेज लन्डनकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भिक्टोरिया मेल भन्छिन्– ‘खोप तथा भाइरल संक्रमणले रोगप्रतिरोधी क्षमतालाई प्रभाव पार्ने भएकाले यसले अस्थायी रुपमा महिनावारी चक्रमा असर पार्ने हुन्छ । त्यसलै पनि यसको अध्ययन महत्वपूर्ण रहेको छ ।’ उनका अनुसार यदि कुनै परिवर्तन देखा परी हाले पनि ती अस्थायी हुन्छन् र तिनले हानी पुर्‍याउँदैनन् ।
यूएस नेशनल इस्टिच्युट अफ हेल्थको समन्वयमा ५ वटा संस्थाले महिनावारी र खोपको सम्बन्धकाबारे अध्ययन गर्ने भएका छन् । कोभिड–१९ को खोपपश्चात् महिनावारीमा पार्ने सम्भावित प्रभावका बारेमा अध्ययन गरिनेछ । यो अध्ययन बोस्टन युनिभर्सिटी, हार्वड मेडिकल स्कुल, जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटी, मिचिगन स्टेट युनिभर्सिटी र ओरेगन हेल्थ एन्ड साइन्स युनिभर्सिटीले संयुक्त रुपमा अध्ययन गर्ने भएका हन्।